Taxanaha Apple Watch 7 wuu sii weynaan doonaa marka loo eego xanta cusub | Waxaan ka imid mac
Waqtigan xaadirka ah waxa kaliya ee aan ka fikiri karno mustaqbalka Apple Watch waa fikrado ama warar xan ah. Xaqiiqdii, waxa kaliya ee aan hubno ayaa ah inay runtii jiri doonto nooc cusub oo saacadda ah. Laakiin ma naqaanno warka ay keeni doonto, haddii ay beddeli doonto naqshadeeda ama midabkeeda. Xanta cusub ayaa tilmaamaysa in xitaa weynaan doonaa marka la barbar dhigo taxanaha 6.
Mar kasta oo Sebtember soo dhawaato, waxaan haynaa warar xan ah oo ku saabsan sida ay u kala horeeyaan. Ma aha oo kaliya sababta oo ah nooca cusub ee iPhone, laakiin waxaa jira alaabooyin kale oo sameeya cinwaannada. Mar labaad waxaan haynaa xan ku saabsan mustaqbalka Apple Watch. Waxaan hore u haysannay isbeddelka naqshadda oo leh muuqaal laba jibbaaran, oo waafaqsan iPhone -ka. Xitaa waxaan haynaa xanta ku saabsan astaamaha cusub laakiin xilligan ma hayno wax intaas ka badan, wararka xanta ah ee laga helay ilo lagu kalsoon yahay, Haa runtii.
Run ahaantii mid ka mid ah ilahaas, UnclePan, ayaa shubay shabakadda bulshada Shiinaha, Vibo, taas oo noqon karta xantii ugu dambaysay ee ku saabsanayd mustaqbalka smartwatch -ka Apple. Waxay u muuqataa inay weynaan doonto. Wax badan maahan. Waxay ka tagi doontaa lahaanshaha 40mm ilaa 41mm iyo 44mm ilaa 45mm. Waxay u muuqataa inaysan ahayn wax badan, laakiin gacanta waxaan ka hadleynaa horumar weyn oo loogu talagalay kuwa jecel saacadaha leh dabeecad.
Sida had iyo jeer marka aan ka hadleyno wararka xanta ah, waa inaan sugno inta laga xaqiijinayo ama la beeninayo. Taasi waxay dhici doontaa uun daqiiqada dhacdadu waxay dhacdaa Apple oo aan wali waxba ka ogeyn wax ku saabsan. Laba taariikho ayaa loo malaynayaa inay yihiin kuwa ugu habboon, Sebtember 14 iyo 21.
Maanta, dhammaan wararka xanta ah, laakiin xaqiiqdu waxay tahay ballaarinta cabbirkan haddii ay la timaaddo naqshadda cusub, macno badan bay samaysaa. Maaddaama milimitirku uu afar jibbaaran yahay, waxay xitaa noqon doontaa mid la dareemo, oo xitaa ka sii weyn oo yaa garanaysa, waxaa laga yaabaa inay hesho shaashad yar oo dheeri ah, oo had iyo jeer ku habboon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Taxanaha Apple Watch 7 wuu ka sii weynaan doonaa marka loo eego xanta cusub